आमाछोरीलाई नै सुत्करी बनाएर युवक फरार | MY OPINION:: MY PRIDE :: Rajendra Bishwakarma
आमाछोरीलाई नै सुत्करी बनाएर युवक फरार
अक्टोबर 10, 2006 by RAJENDRA BISHWAKARMA
लमजुङ, श्रीमान् नै नभएका एक आमाछोरी एउटै कोठामा आलो सुत्केरी भएको सुन्दा कसलाई अचम्म नलाग्ला र ! तर, लमजुङमा यस्तै भएको छ। सदरमुकाम बेंसीशहर–९ सेेराबजारकी फूलमाया बस्याल (नेपाली) र उनकी छोरी जमुनाले एउटै युवकको बच्चा जन्माएका छन्, त्यही पनि ९ दिनको फरकमा।
बेंसीशहरमा ज्यामी काम गरी दैनिक गुजारा चलाउँदै आएका यी आमाछोरीले लमजुङको कुन्छा गाविसका अनिल गुरुङको गर्भलाई जन्म दिएका हुन्। एक वर्षघिदेखि उनीहरूसँगै एउटै कोठामा बस्दै आएका अनिल गर्भवती भएको थाहा पाएपछि साउनबाट भागेका थिए। उनी कहाँ छन् आमाछोरीलाई नै अत्तोपत्तो छैन। फूलमायाले बिहीबार लमजुङ सामुदायिक अस्पतालमा छोरा जन्माएकी हुन्। छोरी जमुनाले भने त्यसको ९ दिनअघि असोज १० गते छोरी जन्माएकी थिइन्। ३५ वर्षीया फूलमाया विधवा हुन्।
जमुना फूलमायाकी जेठी छोरी हुन्। १७ वर्षीया जमुनाको बिहे भएको छैन। फूलमायाका श्रीमान् गोविन्दको ४ वर्षघि कालगतिले मृत्यु भएको थियो।
चरम गरिबीको मारमा रहेको फूलमायाको यो परिवार दुइ सुत्केरी र गरिबीका कारण थप संकटमा परेको छ। फूलमायाका एक छोरा र एक छोरीले जेनतेन दुवै जनालाई खाना पकाएर खान दिने र स्याहारसुसार गरिरहेका छन्।
दशैंको मुखमा सुत्केरी परेका उनीहरूले खानासमेत राम्ररी पाएका छैनन्। मासु खान त झन् परको कुरा भएको छ। ?घरमा चामलको एउटा गेडो छैन, आमा र दिदी दुबै बच्चा च्यापेर बसिरहनुहुन्छ, आफनो भन्ने कोही छैन ! मैले कहाँबाट के खोजेर ल्याएर दिने ?? –फूलमायाकी ११ वर्षीया कान्छी छोरी अनिताले भनिन्।
२७ वर्षीय अनिलले ज्यामी काम गर्ने सिलसिलामा फूलमायासँग मायापिरतीको नाटक रचेका थिए। ?उसको पनि बिहे भइसकेको रहेछ, घरमा श्रीमती र एउटा छोरा रहेछन्। तर मायाको नाटक रचेर मलाई श्रीमतीको रूपमा स्वीकारेपछि ज्यामी काम गर्दै ऊ मेरा २ छोरी र एक छोराका साथमा एउटै कोठामा बस्दै आएको थियो। म गर्भवती भएको थाहा पाएपछि गर्भपतन गर्न लमजुङ सामुदायिक अस्पतालमा पुगें तर अस्पतालले मानेन।
त्यसपछि तनहुँको डुम्रेस्थित मेरीस्टोप अस्पतालमा पुगें। त्यहाँ १० हजार रुपियाँ मागेपछि गर्भपतन गर्न सकिनँ?– फूलमायाले भनिन्, ?छोरीको पनि महिनावारी रोकिएको ५ महिनापछि थाहा भयो, तर गर्भ रहेको थाहा पाएपछि साउने सक्रान्तिको दिनमै ऊ भाग्यो। अहिले कहाँ छ, अत्तोपत्तो छैन।
छोरी पनि निकै सोझी छ, राम्रोसँग बोल्न पनि जान्दिन, म नभएको बेला मौका पारेर उसले बिहे गर्छु भनेर करणी गरेछ, अहिले आमाछोरी नै यसरी सुत्केरी भएर बस्नुपरेको छ। कस्तो दशा लागेको रहेछ।’ आँखाभरि आँसु लिँदै फूलमायाले भनिन्– ‘कस्तो अपराधी रहेछ, ज्यामी काम गरेर जेनतेन बालबच्चालाई पाल्दै आएकी थिएँ, तर अहिले त बिजोग भयो, पढ्न जाने कलिला छोराछोरीले पकाएर दिएको खाएर बस्नुपरेको छ।’
श्रोत: नेपालसमाचारपत्र दैनिक
← सिनो नफालेकामा १८ घर चमार बहिष्कृत
दलितअनलाइनन्यूज्(रोन) सयौं दिनमा →